छाेड्नुहाेस् यस्ता बाहनाहरू जसले तपाइलाइ अगाडी बढ्नबाट राेकिरहेका छन् - ज्ञानविज्ञान
छाेड्नुहाेस् यस्ता बाहनाहरू जसले तपाइलाइ अगाडी बढ्नबाट राेकिरहेका छन्
सँसारका हरेका व्याक्तिसँग दिनमा २४ घण्टा हुन्छ । तर काेही समय नभएकाे गुनासाे गर्दै अल्झिरहेका हुन्छन् भने काेही समयकाे रफ्तारसँगै अगाडी बढिरहेका हुन्छन् । बाहना बनाउनेहरू गुनासाे गर्नमा व्यस्त हुन्छन् भने अवसर हेर्नेहरू आफ्नाे सपनाकाे सिँढी चढ्नमा व्यस्त हुन्छन् ।
छाेड्नुहाेस् यी बाहना जसले तपाइलाइ अगाडी बढ्नबाट राेकिरहेका छन्ः
मसँग पर्याप्त समय छैन ।
आफ्नाे कामकाे लागी समय नहुनु भनेकाे केवल बाहना हाे । जिवनका आफ्ना प्राथमिकताहरू छुट्यायनुहाेस् । अरूलाइ खुसी पार्नकाे लागी आफ्नाे प्राथमिकतालाइ नजरअन्दाज नगर्नुहाेस् । भाेलीकाे लागी आज राती नै समय तालिका बनाउनुहाेस् ।
मसँग स्राेत छैन ।
धेरैकाे भनाइ हुने गर्छ, म यस्ताे गर्न चाहन्छु, तर मसँग पैसा छैन, स्राेत छैन । यदि आफुले खाेजे जस्तै पैसा र स्राेत नमिल्दासम्म काम गर्नुहुन्न भने तपाइकाे सपना सधै सपना नै रहन्छ । आफुसँग तत्काल भएकाे स्राेतकाे सक्दाे उपयाेग गर्नुहाेस् । जहाँ हुनुहुन्छ, जति सक्नुहुन्छ आफुले चाहेकाे कामकाे सुरूवात गर्नुहाेस् । त्यपछी तपाइकाे बाटाे बन्दै जान्छ, स्राेतहरू फेला पर्दै जान्छन् ।
मलाइ सहयाेग गर्ने मान्छे छैनन् ।
तपाइकाे सपना तपाइले देख्नु भएकाे सपना हाे र त्यसकाे लागी तपाइ एक्लै उभिने सहास गर्न सक्नुपर्छ । अर्काे कुरा, जिन्दगी भनेकाे यात्रा हाे, मानिसहरू आउछन्, जान्छन् । सिँगाे यात्रा त तपाइ एक्लैकाे साहसले गर्नुपर्छ । र सत्य याे हाे कि, जसलाइ सहयाे गर्ने वरिपरि काेही हुँदैनन्, त्याे व्याक्ति आत्मनिर्भर बन्छ र जिवनकाे जस्ताेसुकै माेडमा अगाडी बढिरहन सक्ने हिम्मत राख्छ ।
त्यस्ताे नभएकाे भए मैले राम्राे गर्थेँ ।
याे वाक्य धेरै जनाकाे मुखबाट सुन्ने गरिन्छ । बाहना बनाउनेहरू याे वाक्यलाइ आफ्नाे मष्तिक र जिब्राेमा राखेर हिड्छन्, निराश हुन्छन् । र जाे दृण सँकल्पका साथ लागेका हुन्छन्, उनिहरूले त्यसलाइ आफ्नाे पाठ बनाउँछन्, आफुमा निखारता ल्याउनकाे लागी अवसर बनाउँछन् ।
काम सजिलाे भएकाे भए हुनेथियाे ।
उद्दमी, लेखक तथा प्रेरक वक्ताकाे रूपमा प्रसिद्द जिमा राेमले भनेका छन्, “काम सजिलाे भएकाे भए हुने थियाे नभन । मैले अझँ जानेकाे भए हुने थियाे भन ।” आफुलाइ सजिलाे लाग्ने काम मात्र गर्याे भने व्याक्तिले कहिले पनि प्रगति गर्दैन । प्रगति गर्नकाे लागी व्याक्तिले आफुले आफुलाइ चुनाैति दिनुपर्छ ।
सामान्य अवस्थामा काम गरिरहेका कोषहरूमा केही परिवर्तन आउँछ र ती बढ्न थाल्छन् । अनि क्यान्सर हुन्छ । ती कोषहरूमा आउने त्यो डरलाग्दो परिवर्तनका कारण बिभिन्न छन् । हामीलाई थाहा भएका कारणहरूमध्ये मुख्य कारण चुरोट, खैनी हो ।नेपाली महिलाहरूमा भेटिने एउटा मुख्य क्यान्सर पाठेघरको क्यान्सर हो, जसको कारण ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस हो ।
बाँकी क्यान्सरका कारणहरूमा जंकफुड, विषाक्त पदार्थ हालिएका खानेकुरा, कीटनाशक छरेर उमारिएका तरकारी फलफूलको सेवन, वंशाणुगत कारणहरू तथा प्रदुषण हुन् । केही क्यान्सरहरूको कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको
स्वास्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् ।
Don't Miss it सावधान ! माेवाइलकाे धेरै प्रयाेगले जिवन बर्बाद हाेला
Up Next यस्ता छन् कहिलेकाही खुट्टा निदाउनुका कारणहरू, जान्नुहाेस्
बढी देखिने वंशाणुगत रोग र रोगको समाधान
के हो वंशाणुगत रोग ? मानव शरीर अर्बौं सेलहरूको संगठन हो । पुरुषको एक्स र महिलाको वाई मिलेर २३ जोडी…
जान्नुहाेस् बच्चाकाे ओठमा चुम्बन गर्दा बच्चाकाे स्वास्थ्यमा आउन सक्छ यस्ताे समस्या
साना साना केटाकेटी देखेपछि सबैमे मन पराउछन । मायाले हामीले चुम्बन गर्ने गर्छौं । पहिले सामान्यतय बच्चाको गालामा चुम्बन गर्ने…
फ्रिजमा अन्डा राख्दा हुने नोक्सानी यस्ता छन्
स्वादमा भिन्नता यदि तपाईं फ्रिजमा अन्डा राख्नुहुन्छ र पछि त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई फिट्न अपेक्षाकृत मुस्किल हुन्छ । जसले…
आफ्नो जीवनभरी स्वस्थ तथा निरोगी रहनु हरेक व्यक्तिको चाहना हो । स्वस्थ र निरोगी रहनका लागि हरेक व्यक्तिले उचित मात्रामा…
नाथ्री फुट्ने समस्या र समाधान
विभिन्न संक्रमण र अध्यधिक गर्मीले नाक सुक्खा हुँदा नाकबाट रगत बग्ने (नाथ्री फुट्ने) समस्या बढी देखिन थालेको छ । नाकबाट…
यस्ता मसलाको सेवनले चिसोबाट बच्न सकिन्छ
मरिच : मरिच सुगंधित, उत्तेजक र स्फूर्तिदायक वस्तु हो। आयुर्वेद र यूनानी चिकित्साशास्त्रहरूमा यसको उपयोग कफ, वात, श्वास, अग्निमांद्य उन्निद्र…